Fiaraha-miasan’i Sina sy i Madagasikara: 155 tapitrisa dolara ny hanamboarana ny lalana Ambilobe–Vohémar | NewsMada
Fiaraha-miasan’i Sina sy i Madagasikara: 155 tapitrisa dolara ny hanamboarana ny lalana Ambilobe–Vohémar
Vita, omaly, ny fifanarahana fanaovan-tsonia eo amin’i Sina sy i Madagasikara ny amin’ny hanamboarana ny lalam-pirenena RN 5 A, mampitohy an’Ambilobe sy i Vohémar. Taona maro nifanesy, mampitarina ny rehetra io lalana io ka hatomboka amin’izay izany izao ny asa.
Omaly 10 avrily 2019, vita sonia ny fifanarahana hanamboarana ny lalana RN 5 A, Ambilobe–Vohémar, nifanaovan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Andriantsitohaina Naina, sy ny mpirakidraharaha sinoa, i Chen Xiaolei, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Nanatrika ny fotoana ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nampahatsiahy ny fampanantenana nataon’ny fitondrana nifandimby teo, hatramin’ny taona maro, ny hanamboarana io lalana io. « Ankehitriny, tsy honohono na sarintsariny fotsiny fa mahazo matoky ny vahoaka malagasy. Afaka mifandray tsara ny faritra Diana sy ny faritra Sava, faritra mamokatra betsaka, toy ny lavanila, ny kakao, ny jirofo. Noho izany, tsy maintsy atao ny RN 5 A », hoy ny filoha.
Ho azo amin’ny herinandro ny famatsiam-bola ary ho avy any an-toerana ny filoha Rajoelina hametraka ny vatofehizoro. Nanamafy izany ny mpirakidraharaha sinoa, i Chen Xiaolei, nanambara ny tetibola 155 tapitrisa dolara hanamboarana io RN 5 A io, mirefy 160 km. “Tetikasa goavana izany ary efa hatramin’ny taona maro ny niandrasan’ny mponina azy”, hoy ny mpirakidraharaha sinoa.
Manamafy ny fiaraha-miasa
Nosoritan’ireo avy ao amin’ny masoivoho sinoa ihany fa hampiakatra ny fari-piainan’ny mponina any amin’iny faritra iny ny fahavitan’ny lalana, hampiroborobo ny varotra sy ny fifanakalozana, hampandroso ny faritra sy ny toekarem-pirenena ankapobeny. “Manambara ny fisokafan’ny fiaraha-miasan’i Sina sy i Afrika izao, araka ny politikan’ny filohan’ny Repoblikan’i Sina, i Xi Jinping”, hoy ny mpirakidraharaha sinoa. “Manaporofo ny fahamafisan’ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta koa izao, ary ataonay ny hahamora ny fahavitan’io tetikasa io”, hoy ihany izy.
Orisana sinoa efa miasa eto Madagasikara maherin’ny 30 taona ny hanao izany fotodrafitrasa izany, azo lazaina fa karazana orinasa malagasy ihany, mahafehy tsara ny tokony hatao rehetra, araka ny fanamarihan’ireo avy ao amin’ny masoivoho sinoa. Hatomboka izany ny asa Ambilobe-Vohémar fa maro ihany koa ny faritra miandry fanamboaran-dalana any aminy, mampijaly ny mponina hatramin’ny taona maro.